(Vilka rättigheter har jag?)
Daryeelka caafimaad ee Iswiidhan wuxuu u hoggaansamaa Sharciga daryeelka caafimaad, oo sheegaya in dhammaan dadka deggan Iswiidhan ay tahay inay sharuudo isku mid ah ku helaan daryeel caafimaad wanaagsan oo sugan. Ruuxa ku jira diiwaanka dadweynaha Iswiidhan wuxuu daryeelka caafimaad u leeyahay xaq la mid ah kan uu leeyahay ruuxa leh jinsiyadda iswiidhishka.
Xaq doorasho daryeel-bixiye, Doorashada daryeelka Stockholm
Bukaansocodka Stockholm wuxuu xaq u leeyahay inuu iskii u doorto rugta caafimaad ee uu daryeelka u raadsanayo. Wuxuu masalan ruux dooran karaa in xaruun daryeel caafimaad ku taal degmo kale uu daryeel ka raadsado haddii xilliga sugitaanka halkaa uu ka yar yahay kan xaruunta caafimaad ee degmadiisa. Xaqa doorashada wuxuu xitaa khuseeyaa daryeel-bixiyeyaal kale oo badan, sida daryeelka hooyooyinka iyo daryeelka carruurta.
Waxaa daryeel-bixiye lagu doortaa ama Daryeel-tilmaamaha adeegiisa internet (Xiriiradeyda daryeel), ama iyadoo foom laga buuxiyo rug caafimaad. Daryeel-tilmaamaha wuxuu leeyahay warbixin ku saabsan doorashada daryeel ee magaalada Stockholm oo luuqado badan oo kala duwan ah: vardguiden.se
Dhammaan shaqaalaha daryeelka caafimaad ee Iswiidhan waxaa saaran mas’uulyad sirxajin. Taa waxey sidoo kale khuseysaa turjumaanada. Mas’uulyadda sirxajinta micnaheeda waa in cidina aan loo oggoleyn inay ka warranto bukaansocod xogtiisa, cudurkiisa ama daryeelkiisa iyadoon marka hore wax ruqso ah isaga lka heysanin. Mas’uulyadda sirxajinta waxey khuseysaa warbixinta qoraalka ah iyo midda oraahda ahba.
Hawlwadeennada daryeelka waxey ku gudbi karaan mas’uulyadda sirxajinta hadduu ilmo ku jiro xaalad qatar ku ah nafsaddiisa.
Xaq wax lagu diido
Bukaansocodka ayaa iskii u go’aamiya inuu daryeel rabo iyo in kale, wuuna diidi karaa dabiib, baaritaanno ama daawo. Hase ahaatee sidoo kale waxaa jiri kara xilliyo aan bukaanka loo oggoleyn ama uusan awoodin inuu go’aan gaaro, masalan haddii bukaanka uu si xun maskaxda uga xanuunsan yahay ama uu hayo cudur ka mid ah cudurrada faafa.
Bukaansocodka wuxuu xaq u leeyahay in looga warbixiyo xaaladdiisa caafimaad iyo noocyada daryeel ee jira. Warbixinta waa in lagu bixiyaa hab uu bukaansocodku wax ku fahmi karo. Hadduu bukaanku turjumaan af ama mid dhegool u baahan yahay, xaq buu u leeyahay in loo qabto mid.
Dammaanad daryeel micnaheedu waa in bukaanka uu daryeelka uu u baahan yahay ku helo xilli macquul ah. Ruuxa u baahan inuu la kulmo takhtar xaruun daryeel waa inuu taa ku helaa muddo shan maalmood ah.
Ruuxa u baahan inuu la kulmo takhtar takhasus gaar ah leh waa inuu taa ku helaa muddo ugu badnaan 30 maalmood ah ka dib markuu go’aan gudbin ka helo xaruunta daryeelka. Haddii takhtarka takhasuska gaarka ah leh uu go’aamiyo in bukaanka uu u baahan yahay daaweyn waa in taa lagu billaabaa sida ugu dhaqsaha badan, ugu dambeyn 90 maalmood go’aanka ka dib.
Hadduusan bukaanka ku helin daryeel muddooyinka ku cayiman dammaanadda daryeelka, wuxuu xaq u leeyahay inuu iska beddelo daryeel-bixiyaha.
Faahfaahinta dammaanadda daryeelka waxaa luuqado badan oo kala duwan looga heli karaa Daryeel-tilmaamaha: vardguiden.se
Daryeel ka cabasho
Haddii bukaansocodka ama xigtadiisa aynan ku qanacsaneyn daryeelka waxaa laga dhulbillaabaa iyadoo lala hadlo shaqaalaha laga helay daryeelkaa. Waxaa xitaa lala xiriiri karaa madaxa rugta daryeelka. Haddii intaa dhibaatooyinka jira lagu xallin waayo waxaa lala xiriiri karaa Golaha bukaansocodka. Golaha bukaansocodka waxay baari karaan wixii dhacay iyagoo soo jeedinaya xal.
Daryeelka caafimaad ee Iswiidhan waa inuu u hoggaansan yahay sharciyada iyo nidaamyada waddanka ka jira. Haddii bukaanka ama xigtadiisa ay u arkaan in takhtar ama hawlwadeen kale ee ka shaqeeya daryeelka uunnan raacin sharciyada iyo nidaamyada jira waxaa looga dacwoon karaa hay’ad la yiraahdo Golaha daryeelsugidda caafimaadka, HSAN.
Wixii faahfaahin ah ka akhriso bogga: www.hsan.se
(Regler och rättigheter)